Pogba oo hal arin ku dooran doona Juventus marka loo fiiriyo Paris Saint-Germain – Gool FM
(Turin) 18 Maajo 2022. Juventus ayaa durba bilawday inay dajiso qoshaheeda xilli ciyaareedka soo socda uu ku howlgalayo tababare Massimiliano Allegri, kaddib markii ay xaqiijisatay ka qeybgalkeeda Champions League ee xilli ciyaareedka soo socda.
Juventus ayaa kooxda ku xoojin doonta heshiisyo xooggan, waxaana maalmihii ugu dambeeyay lala xiriirinayay ciyaartoy khabiiro ah sida Di Maria, Perisic iyo Paul Pogba.
Waxa ay u muuqataa in Bianconeri ay ugu horayn bartilmaameedsanayso ciyaartoyda uu qandaraaskoodu dhacayo dhamaadka bisha June, Pogba ayaana loo arkaa mid ka mid ah magacyada ugu caansan ee lagu heli karo heshiiska xorta ah.
Ilo wareedyo badan ayaa xaqiijiyay in ciyaaryahanka Manchester United uu haatan dooranayo inuu u dhaqaaqo Paris Saint-Germain ama uu ku laabto kooxdiisii ​​hore ee Juventus, taasoo uu kula noolaa marxaladii ugu wacneyd ee xirfadiisa kubadda cagta.
Wargeyska Corriere dello Sport ee dalka Talyaaniga ayaa xaqiijiyay in dalabka Juventus ee Pogba uu weli aad uga hooseeyo illaa iyo hadda marka loo eego dalabka Paris Saint-Germain.
Laakiin Pogba ayaa isku dayi doona in uu Juventus la saxiixdo haddii ay dhacdo in kooxda reer Talyaani ay horumariso dalabkeeda isla markaana ay bixiso mushaar xitaa ku dhow midka ay Paris Saint-Germain soo bandhigtay.
Warbaahinta Faransiiska uu ugu horreeyo Le10Sport ayaa ku warameysa in wakiilka Paul Pogba uu kulan dhow la qaadan doono maamulka kooxda Juventus si loo dhameeyo heshiiska.